Agricultural Land For Sale in Calatagan, Batangas
Uluhlu lweeNtengiso zePropathi: Iqashiso lomhlaba Umhlaba wezoLimo Batangas ICalatagan
Indawo yokuthengisa yezolimo iyathengiswa eCalatagan, eBatangas
Iinkcukacha zepropathi zezi zinto zilandelayo: Ipropathi ingaphakathi kwePlaya Calatagan Calatagan Batangas (isahlulo sabucala). Ukwahlulahlula-hlula okwahlukileyo kwe-BEACH eCalatagan 3 drive ukusuka eManila. Umdibanisi ka-Playa Calatagan Ukwahlula-hlula yiLandco (umphuhlisi / umnini-ndawo omnye onje ngePunta Fuego) Umhlaba uwonke u ...
Published by Gloryby B. Maula
umbono Umhlaba wezoLimo ishicilelwe kwiiveki 3 ezidlulileyo
Intengiso: 4.4 iihektare iiProphathi zaseLwandle eziPhambili kwindawo yaseCalatagan BatangasDetails: Indawo yoMhlaba: iihektare ezi-4.4 ziyandiswa ukuya kwii-6.6 iihektare Kubuza amaxabiso = Php 220M (Kuyathethwa kakhulu) NGOKUGQIBELA NABAKHUSELEKILEYO BUYENZE NJENGOKO .Nolwazi oluninzi, ujonga kunye nezinye izinto ezixhalabisayo, fowunela okanye ubhalele mna ngobubele ku-O9175764748. Ukujonga ishedyuli ...
Kwintengiso | 0.06 Ac
Published by David Articulo
220,000,000 Peso ₱
umbono Umhlaba wezoLimo ishicilelwe ngenyanga 1 edlule
I-Ostreliya yaseNtshona (esishwankathelwe njenge-WA) ngurhulumente okwindawo yesibini nentshona yeOstreliya. Ibotshelelwe luLwandlekazi i-Indiya ukuya emantla nasentshona, kunye noLwandlekazi olusezantsi emazantsi, kwi-Nxweme eseMantla ukuya emantla-mpuma, kunye noMzantsi Australia ukuya emazantsi-empuma. INtshona ye-Australia lelona lizwe likhulu lase-Australia, inomhlaba opheleleyo we-2,529,875 yeekhilomitha (i-976,790 sq mi), kunye nolwesihlulo sesibini ngobukhulu belizwe emhlabeni, edlula kwiRiphabhliki yaseSakha yaseRussia kuphela. Lo rhulumente unabantu abamalunga nezigidi ze-2.6 ezigidi-kufutshane ne-11 ipesenti yelizwe liphela - uninzi lwabo (i-92 ipesenti) bahlala kwikona esemazantsi-ntshona, i-79 ipesenti yabantu abahlala kwindawo yePerth, beshiya intsalela ilizwe linabantu abaninzi. Undwendwe lokuqala lwaseYurophu kwiNtshona ye-Australia yayingumhloli wamazwe waseDatshi, uDirk Hartog, owayetyelele unxweme lwase-Australia e-1616. Indawo yokuqala yaseYurophu yaseNtshona Ostreliya yenzeka emva kokufika kukaMajor Edmund Lockyer ngomhla we-26 ngoDisemba 1826 wokukhutshelwa esikhundleni korhulumente waseNew South Wales. Uye waseka umkhosi oxhasa abagwetyiweyo e-King George III Sound, e-Albany yanamhlanje, kwaye nge-21 kaJanuwari 1827 ngokusemthethweni wasithimba isithathu sentshona yelizwekazi i-Britane Crown. Oku kwalandelwa kukusekwa kweSwan River Colony e1829, kubandakanya indawo yakomkhulu, iPerth. I-York yaba sisixeko sokuqala sokuhlala ngaphakathi e-Australia. Indawo eyi-97 yeekhilomitha (i-60 yeekhilomitha) kwimpuma yePerth, yagqitywa ngo-16 ngo-Septemba 1831.Western Australia yazuza urhulumente onoxanduva kwi-1890 kwaye yadityaniswa namanye amaBritane aseOstreliya e1901. Namhlanje, uqoqosho lwayo ikakhulu luxhomekeke kwezimbiwa, ezolimo, ukuthunyelwa kwelinye ilizwe kunye nezokhenketho. Urhulumente uvelisa i-46 ipesenti yokuthumela kwelinye ilizwe e-Australia. I-Ostreliya yaseNtshona ibe ngumlimi wesibini ngobukhulu emhlabeni ovelisa intsimbi.